James Swan oo markale baaq isbedel ah u direy Guddiga Doorashada Jubbaland
Eedeysane ka hor qirtey Maxkamada Sare ee Puntland kufsigii Caa’isha Ilyaas
Dowladda Federaalka Oo War ka Soo Saartay Arrimaha Doorashooyinka Jubbaland.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka oo ku baaqday in Shir dib u heshiisiin loo qabto Jubbaland
Madaxweyne Deni ko dhamaystiray Gudiga ku meel-gaarka ah ee Doorashooyinka Puntland.
Madaxweyne Deni oo dhamaystiray Gudiga ku meel-gaarka ah ee Doorashooyinka Puntland.
Guddoomiyihii Baarlamaanka Jubbaland oo mar kale dib loo doortay doorasho ka dhacday Kismaayo
Deni: Wadahadal ayaanu Somaliland Kala Galaynaa dhulka Puntland ee ay kusoo Xadgudubtey
Yaa loo doortay Gudoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Jubaland?
Maxaa ka soo baxay dhagaysiga kiiskii marxuumad Caaisha?
Maxaa ka soo baxay dhagaysiga kiiskii marxuumad Caaisha Ilyaas?
Doorashada Guddoonka Baarlamaanka Jubbaland oo ka socota Kismaayo iyo Booliska AMISOM oo amniga sugaya
Dagaal culus oo saaka ka dhacay deegaanka Daynuunay ee duleedka Baydhabo
Shirkii Dib u heshiisiinta Galmudug oo markii labaad dib u dhac ku yimid
Gudigga doorashooyinka Jubaland oo dib u furay diiwaangelinta Musharaxiinta.
People of Jubalands are in Between two Hard Rocks
People of Jubbland are in Between two Hard Rocks
Coalition For Change & Clan Elders Meeting With Somalia International Partners
Shirkadda Danwadaag oo ku soo bandhigtey Jowhar abuur cusub oo bariis ah (Sawiro)
Zakia Xuseen ” Waxaan Fashilinay Isku day dil “
Goobaha la dejinayo Ergada ka qeyb galeysa shirka Dib u heshiisiinta Galmudug oo la diyaariyay
Cabsi laga qabo in wabiga Shabeelle ku fataho xaafado ka tirsan Jowhar
Sheekadii xiisaha laheyd ee Libin Jaceyl Qeybtii 95aad
Qaramada Midoobay,midowga Afrika iyo IGAD oo ka hadlay Doorashada Jubbaland
Daawo Sawirada shirmbiro sababay in ay ku dhacdo diyaarad dalka Ruushka
No deal for Ethiopian emissary to Jubbaland as Madobe shrugs off poll talks
Ciidamada Baakistaan iyo Hindiya oo Ku Dagaalamay Kashmiir
Wakiilada Beesha Caalamka oo labo qodob oo culus ah ula tagay Axmed Madoobe (Sawirro)
Khayre oo Cisbitaalka Ku Booqday Askartii Dhaawacyadu Ku Gaareen Weerarkii Alshabaab ee Awdheegle
Madaxweynaha Puntland oo Xilal cusub u magacaabay Garsoorka Gobolka Mudug iyo Wasarada Arimaha Gudaha.
Madaxweynaha Puntland oo Xilal cusub magacaabay.
Wafdi ka socda Beesha Caalamka oo maanta ku wajahan Kismaayo iyo dadaaladii u dambeeyay…
Hay’ada Kaalo oo kulan wacyigelin ku qabatay Qardho.
Hay’adda Kaalo oo kulan wacyigelin ku qabatay Qardho.
Saraakiishii ka socday Sirdoonka Itoobiya oo labo qodob hordhigay Axmed Madoobe
Ilhan Cumar iyo Rashida Tlaib oo Booqanaya Qudus
Al-Shabaab spokesman Ali Dheere reportedly wounded in action
Maamulka G/Banaadir oo balan qaaday bixinta mushaarka Qoyskii ay ka tageen Mas’uuliyiintii ka tirsanaa Maamulka